प्रभु बैंकको नाफा ४० % ले बढ्यो, वितरण योग्य नाफा करीब १ अर्ब | Artha News Nepal
Home	बैंकिङ	प्रभु बैंकको नाफा ४० % ले बढ्यो, वितरण योग्य नाफा करीब १ अर्ब
प्रभु बैंकको नाफा ४० % ले बढ्यो, वितरण योग्य नाफा करीब १ अर्ब
by अर्थन्यूज माघ १४, २०७७
काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म प्रभु बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ९९ करोड ९८ लाख ५ हजार रहेको छ ।
करीब १ अर्ब वितरणयोग्य नाफा गरेको उक्त कम्पनीले रू. १ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख ८४ हजार खुद नाफा गरेको छ । माघ १४ गते सार्वजनिक कम्पनीको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा कम्पनीले ४० प्रतिशत बढी खुद नाफा गरेको हो ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. १ अर्ब ८ करोड ५७ लाख ७४ हजार खुद नाफा गरेको थियो । सञ्चालन नाफा करीब ४३ प्रतिशतले बढेकोले कम्पनीको नाफामा वृद्धि देखिएको हो ।
गत वर्ष रू. १ अर्ब ५० करोड ४२ लाख १७ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. २ अर्ब १४ करोड ६९ लाख ६२ हजार यो नाफा गरेको छ । १० प्रतिशत बोनस शेयरपछिको चुक्तापूँजी रू. ११ अर्ब ३४ करोड ७० लाख ५७ हजार पुगेको छ ।
कम्पनीको जगेडा कोष रकम साढे ८ प्रतिशतले बढेर रू. ४ अर्ब १८ करोड ६१ लाख ३० हजार कायम भएको छ । कम्पनीले गत वर्षभन्दा करीब २६ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ६२ अर्ब २ करोड ४८ लाख २८ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ भने १ दशमलव २७ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब २६ करोड ५ करोड ७४ लाख ८३ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
यस वर्ष कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने गत वर्षभन्दा कम भएको छ । गत वर्ष ३ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमा झरेको हो । प्रतिशेयर आम्दानी रू. २६ दशमलव ७७ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४७ दशमलव २९ रहेको छ ।
एनएमबि म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित दुवै योजनाको प्रतिइकाई खुद मूल्य वृद्धि